Askar Fara Badan Oo Dowlada Federaalka Looga Dilay Sh/hoose. – Bogga Calamada.com
Askar Fara Badan Oo Dowlada Federaalka Looga Dilay Sh/hoose.
August 30, 2016 6:27 am Views: 11
Ciidamada mujaahidiinta Jabhadda WI Sh/hoose ayaa xaley silsilado weeraro ah ku qaaday saldhigyo iyo xarumo maleeshiyaadka murtadiinta iyo ciidamada Kufaarta Afrikaanta ay ku leeyihiin Sh/hoose, Iyadoona weeraradaas qasaare xoogleh lagu gaarsiiyey cadowga.
Weeraradan oo ahaa kuwo qorsheysan ayaa xaley saqdii dhexe ka dhacay deegaanada Lambar 50, Aala-Yaasir iyo Muuri, halkaas oo ay saldhigyo ku leeyihiin ciidamada saliibiyiinta iyo maleeshiyaatka murtadiinta.
Howlgalkan oo bilowday xaley sideed saac oo saqdhexe ayey Saraakiishu sheegeen in uu soo gabagaboobay aroornimadii hore ee saaka, salaadda subax ka dib. Waxaana uu socday ku dhawaad afar saacadood oo xiriir ah.
Saldhigyada la weeraray waxaa ka mid ah saldhigga Muuri iyo midka Aala-Yaasir oo ay joogeen murtadiinta, iyo saldhigga Lambar 50 oo ay joogeen ciidamada Kufaarta Afrikaanta.
Ciidamada Mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay saldhigyada murtadiinta ee Muuri iyo Aala-Yaasir, halka sidoo kalena weerar mashquulin ah lagu qaaday saldhigga Lambar 50 ee ay dagan yihiin saliibiyiinta si aysan ugu soo gurman saaxiibadooda.
“Allaah fadligii, waxay xaley Mujaahidiintu galeen deegaano ka tirsan Sh/hoose oo cadowga uu ku sugnaa, waxayna halkaas ku dileen cadowg fara badan, Iyagoo sidoo kalena soo ganiimeystay hub iyo gaadiid” ayuu yiri Sarkaal u hadlay Mujaahidiinta.
Ugu yaraan 10 askari oo ka tirsan murtadiinta ayaa lagu dilay weeraradaas sida ay noo sheegeen saraakiisha mujaahidiinta, Waxaana sidoo kale halkaas lagu dhaawacay maleeshiyaad kale oo dhowr ah.
Ciidamada Mujaahidiinta ayaa sidoo kale howlgalkii xaley ku soo furtay gaari nooca raaxada ah, Qori PKM ah iyo dhow qori oo AK47 ah sida ay noo sheegeen Saraakiisha Jabhadda Sh/hoose.
Wariyaha Idaacada Andalus ee Sh/hoose ayaa soo sheegaya in howlgalkii xaley uu ahaa weerar xasmin ah oo la doonayey in wadada laamiga ah looga ciribtiro murtadiinta maadama mudooyinkii dambe gaadiidka rakaabka ay ka go’een isticmaalka wadadaas sababo xagga amaanka ah.
“howlgalkan wuxuu ahaa mid qorsheysan oo abaabulkiisa uu socday mudooyinkii la soo dhaafay, waxaana uu yimid ka dib codsiyo isdaba joog ah oo ka yimid shacabka iyo gaadiidleyda kuwaas oo dalbanayey in murtadiinta laga sifeeyo wadada laamiga ah, maadama uu soo socdo xilli roobaad ayna gaadiidka rakaabka ah ku adkaan doonto isticmaalka wadooyinka qardajeexa ah xilliga ay ka dhuumanayaa isbaarooyinka murtadiinta ee wadada laamiga” sidaas waxaa yiri wariyaheena Sh/hoose.
WI Sh/hoose ayaa dhowrjeer ku guuleysatay in ay dadka muslimiinta ka horleexiso isbaarooyin iyo bar koontaroolo murtadiinta ay soo dhigteen deegaanada Wilaayada si ay ugu dhibaateeyaan muslimiinta, waxaana dhowrjeer howlgalo ay mujaahidiintu qaadeen lagu dilay maleeshiyaad iyo saraakiil ku caan baxday beegsiga gaadiidka dadweynaha iyo Rakaabka isaga kala gudbaya deegaanada ay wilaayadu ka kooban tahay.